ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်ကော်ဖီလျော့သင့်/ မလျော့သင့် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေဟာ ကော်ဖီကိုတစ်နေ့ ၂၀၀မီလီဂရမ် သို့မဟုတ် အသင့်သောက်ကော်ဖီ ၂ခွက်မျှသာသောက်သင့်ပါတယ်။
ကဖိန်းဓာတ်ဟာ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ချော့ကလက် စတဲ့စားစရာတွေအပြင် အချို့အချိုရည်၊ အားဖြည့်အချိုရည်နဲ့ အချို့ အအေးမိအဖျားကျဆေးတွေမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ကဖိန်းဓာတ်အများအပြား သောက်ခြင်းက ကလေးပေါင်မပြည့်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး က လေးကြီးလာတဲ့အခါ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကဖိန်းဓာတ် အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်းက ကိုယ်ဝန်တောင် ပျက်ကျစေနိုင်ပါတယ်။
ကဖိန်းဓာတ်ကို တိခနဲဖြတ်စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကဖိန်းဓတ်မပါတဲ့ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်သောက်ခြင်း၊ ရေနဲ့အသီးဖျော်ရည်တွေ သောက်ပေးခြင်း၊ ကဖိန်းဓာတ်များတဲ့ အားဖြည့်အချိုရည်တွေလျော့သောက်ခြင်း ဖြင့် ကဖိန်းဓာတ်ကို တစ်နေ့၂၀၀မီလီဂရမ်အထိ လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒီပမာဏထက် တစ်ခါတစ်လေ ကျော်သွားတတ်တာမျိုးကို စိတ်မပူပါနဲ့။ အနည်းငယ်မျှကျော်ခြင်းက အပြောင်းအလဲ မဖြစ်စေပါဘူး။ အအေးမိတုပ်ကွေး ဆေးတွေအပြင် အခြားဆေးတွေမသောက်ခင် သားဖွားဆရာမ သို့မဟုတ် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင် တစ်ယောက်ယောက်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
● အသင့်သောက် ကော်ဖီတစ်ခွက် : ၁၀၀မီလီဂရမ်
● နှပ်ကော်ဖီတစ်ခွက် : ၁၄၀မီလီဂရမ်
● လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက် : ၇၅မီလီဂရမ်
● ကိုလာတစ်ဘူး : ၄၀မီလီဂရမ်
● အားဖြည့်အချိုရည်၂၅၀မီလီလီတာ : ၈၀မီလီဂရမ် (အရွယ်အစားကြီးလေလေ ကဖိန်းပါဝင်မှု များလေလေ)
● ချော့ကလက်အလွတ် ၅၀ဂရမ်တစ်ဘား : ၂၅မီလီဂရမ်အောက်
● နို့ချော့ကလက် ၅၀ဂရမ်တစ်ဘား : ၁၀မီလီဂရမ်
ကိုယ္​ဝန္​​ေဆာင္​​ေတြဟာ ​ေကာ္​ဖီကိုတစ္​​ေန႔ ၂၀၀မီလီဂရမ္​ သို႔မဟုတ္​ အသင္​့​ေသာက္​​ေကာ္​ဖီ ၂ခြက္​မွ်သာ​ေသာက္​သင္​့ပါတယ္​။
ကဖိန္​းဓာတ္​ဟာ ​ေကာ္​ဖီ၊ လက္​ဖက္​ရည္​၊ ​ေခ်ာ့ကလက္​ စတဲ့စားစရာ​ေတြအျပင္​ အခ်ိဳ႕အခ်ိဳရည္​၊ အားျဖည္​့အခ်ိဳရည္​နဲ႔ အခ်ိဳ႕ အ​ေအးမိအဖ်ားက်​​ေဆး​ေတြမွာ ပါဝင္​ပါတယ္​။
ကိုယ္​ဝန္​​ေဆာင္​ခ်ိန္​ ကဖိန္​းဓာတ္​အမ်ားအျပား​ ေသာက္​ျခင္​းက က​ေလး​ေပါင္​မျပည္​့ျခင္​းကို ျဖစ္​​ေစနိုင္​ၿပီး ​က ေလးႀကီးလာတဲ့အခါ ႏွလံုး​ေရာဂါ ျဖစ္​​ေစႏိုင္​ပါတယ္​။ ကဖိန္​းဓာတ္​ အလြန္​အကြၽံ​ေသာက္​သံုးျခင္​းက ကိုယ္​ဝန္​​ေတာင္​ ပ်က္​က်​ေစႏိုင္​ပါတယ္​။
ကဖိန္​းဓာတ္​ကို တိခနဲျဖတ္​စရာ မလိုပါဘူး။ ဒါ​ေပမယ့္ ကဖိန္​းဓတ္​မပါတဲ့ ​ေကာ္​ဖီ၊ လက္​ဖက္​ရည္​​ေသာက္​ျခင္​း၊ ​ေရနဲ႔အသီ​းေဖ်ာ္​ရည္​​ေတြ ​ေသာက္​​ေပးျခင္​း၊ ကဖိန္​းဓာတ္​မ်ားတဲ့ အားျဖည္​့အခ်ိဳရည္​​ေတြ​ေလ်ာ့​ေသာက္​ျခင္​း ျဖင္​့ ကဖိန္​းဓာတ္​ကုိ တစ္​​ေန႔၂၀၀မီလီဂရမ္​အထိ ​ေလ်ာ့ခ်နိုင္​ပါတယ္​။ ဒီပမာဏထက္​ တစ္​ခါတစ္​​ေလ ​ေက်ာ္​သြားတတ္တာမ်ိဳးကို စိတ္​မပူပါနဲ႔။ အနည္​းငယ္​မ်ွ​ေက်ာ္​ျခင္​းက အ​ေျပာင္​းအလဲ မျဖစ္​​ေစပါဘူး။ အ​ေအးမိတုပ္​​ေကြး ​ေဆး​ေတြအျပင္​ အျခား​ေဆး​​ေတြမ​ေသာက္​ခင္​ သားဖြားဆရာမ သို႔မဟုတ္​ ​ေဆးဝါး ကြၽမ္​းက်င္​ တစ္​​ေယာက္​​ေယာက္​ကို ​ေမးျမန္​းသင္​့ပါတယ္​။
အသင္​့​ေသာက္​​ ေကာ္​ဖီတစ္​ခြက္​ : ၁၀၀မီလီဂရမ္​
ႏွပ္​​ေကာ္​ဖီတစ္​ခြက္​ : ၁၄၀မီလီဂရမ္​
လက္​ဖက္​ရည္​တစ္​ခြက္​ : ၇၅မီလီဂရမ္​
ကိုလာတစ္​ဘူး : ၄၀မီလီဂရမ္​
အားျဖည္​့အခ်ိဳရည္​၂၅၀မီလီိိလီတာ : ၈၀မီလီဂရမ္​ (အ႐ြယ္​အစားႀကီး​ေလ​ေလ ကဖိန္​းပါဝင္​မႈ မ်ား​ေလ​ေလ)
​ေခ်ာ့ကလက္​အလြတ္​ ၅၀ဂရမ္​တစ္​ဘား : ၂၅မီလီဂရမ္​​ေအာက္​
နို႔​ေခ်ာ့ကလက္​ ၅၀ဂရမ္​တစ္​ဘား : ၁၀မီလီဂရမ္
၂၄.၃.၂ဝ၂ဝ | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူညီဘဲ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်...
၁၉.၃.၂ဝ၂ဝ | ကိုယ်၀န်ဆောင်နှင့်ကျန်းမာရေး
1. ကလေးကို ဘယ်အချိန် နို့စတိုက်သင့်သလဲ တွေးမနေပါနဲ့။ ကလေးမွေးပြီးစမှာ ထွက်တဲ့နို့ဦးရည်ဟာ ကလေးကို ရောဂါပိုးမွှားများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ နို့ဦးရည်မှာ ကလေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ အကုန်ပါဝင်တဲ့အတွက် မွေးကင်းစကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
2. နို့တိုက်စမှာ သက်သောင့်သက်သာမရ...